Athletic Bilbao oo guul dahabi ah kaga gaartay Barcelona kulankii furitaanka horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka cusub 2019-20… + SAWIRRO – Gool FM
(Spain) 16 Agoosto 2019. Kooxda Athletic Bilbao ayaa guul dahabi ku gaartay garoonkeeda San Mamés, kaddib markii ay 1-0 kaga adkaatay Barcelona, kulankii caawa lagu daah furay horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 0-0 ah.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada kooxood Athletic Bilbao iyo Barcelona ayaa waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican ee ku saleysnaa weerar iyo weerar celis, waxayna sameeyeen fursado dhowr ah ee loo filan karay goolal.
Daqiiqadii 89-aad Aritz Aduriz oo badal ciyaarta ku soo galay ayaa mar qura niyad jabiyay taageerayaasha kooxda Barcelona, kaddib markii uu hogaanka u dhiibay naadigiisa Athletic Bilbao, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Ander Capa.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-0 ah, ay guusha ku raacday Kooxaha Athletic Bilbao, waxayna awoodeen in saddexda dhibcood ay kaga qaataan Barcelona garoonkoodda San Mamés, kulankii caawa lagu daah furay horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20.